Abafundi abebeqeqeshwa abayisikhombisa bamanje nabadala base-CAES SSS (kusukela kwesobunxele phezulu) nguNks Cebisa Nkatu, uNks Wendy Corfe, uNks Sarah O’Connell, uMnu Mzamo Zondi, uNks Claire Mondlana, uNks Janet George noMnu Rethabile Oliphant.
Uphiko Lwezokwesekwa Kwabafundi (i-SSS) e-Kolishi LezoLimo, Ezobunjiniyela NezeSayensi (e-CAES) ibungaza ukuphothula izifundo kwabafundi asebe ongoti bezokweluleka ngengqondo, njengoba kuzothweswa iziqu abanye abane abasha maduze nje. Ilolu phiko kuphela lwe-College SSS e-UKZN olunohlelo lokuqeqesha olwesekwa yi-Health Professions Council of South Africa (i-HPCSA).
Lolu hlelo lwethulwa ngowezi-2016.
UNks Wendy Corfe, uNks Sarah O’Connell, uNks Cebisa Nkatu, uNks Lauren Beukes, uNks Lovey Mnisi, uNks Mayure Padayachee, uNks Janet George, uNks Ronelle Msomi, uMnu Rethabile Oliphant, noNks Claire Mondlana kumanje benza umsebenzi emkhakheni wabo ngemva kokuphasa izivivinyo zebhodi nokubhalisa kwi-HPCSA, kanti u-George, uMsomi, uOliphant, noMondlana sebeqashwe e-UKZN. UNks Lala Domleo, uMnu Mzamo Zondi, uNks Sarah Miller noNks Sineliso Thabethe baqedela ukuphothula izifundo zabo.
I-SSS isanda kuthola igunya lokusebenza, phecelezi i-accreditation, leminyaka emihlanu lezifundo zayo zokweluleka ngengqondo ngemva kokulandela imigomo enqala ye-HPCSA efaka ukuya endaweni yomsebenzi, izingxoxo nabafundi abaqeqeshwayo, ukuhambisa izinhlelo zentuthuko nokuhlola indawo yokusebenza. I-SSS inegunya lesikhashana lokuqeqeshela izifundo zokweluleka ngengqondo kwezemfundo.
UDkt Nicholas Munro, umfundisi eMkhakheni Wezifundongqondo eKolishi leesiNtu, ubalule ubumqoka balezi zifundo.
‘I-CAESS SSS ibe negalelo elimqoka eMkhakheni Wezifundongqondo, ezokweluleka nezokweluleka kwezemfundo KwaZulu-Natali. Ngaphambi kokuthi lezi zifundo ziqalwe, cishe bonke abathweswe iziqu kwezokweluleka ngengqondo nezokweluleka ngengqondo kwezemfundo baphoqeleke ukuthi bafundele umsebenzi ngaphandle kwaKwaZulu-Natali, okube wukulahlekelwa okukhulu esifundazweni nase-UKZN.’
Lezi zifundo zilandela uhlelo olunzulu lokuthuthukiswa kwabafundi abasaqeqeshwa amahora ambalwa zicijwa emsebenzi masonto onke ukuthi zisize ngokuphelele ohlelweni lomsebenzi wekweluleka ohlinzekwa i-SSS kubafundi abayizi-10 000 baseKolishi e-Howard College, e-Westville naseMgungundlovu. Abafundi abasaqeqeshwa bashintshanisa amanyuvesi abaya kuwona, basebenze ngaphansi kwezimo ezihlukene naseminyangweni ehlukene eNyuvesi. Babamba iqhaza emsebenzini wokusiza umphakathi nezikole nezikhungo zendawo ngokulandela imigomo enqala elawula ukusebenza.
‘Ukuba nabafundi abasaqeqeshwa kwandisa amandla ethu okweseka abafundi, kwandise ukunotha nokuxuba kwethimba lethu emazingeni ehlukene kanti kuningi ukuhlolana kontanga, ukufunda, ukuthuthukiswa, ukuqeqeshwa, ukubuyekezwa nokuhlolwa,’ kusho imenenja ye-CAES SSS, uNks Shelley Barnsley.
‘Uhlelo lwethu luwuhlelo lokuqeqesha labo abafisa ukusiza abenza ucwaningo kanti lunokuqeqesha abahloli ngokwendlela yobufakazi bocwaningo nekhono,’ kusho u-Barnsley. ‘Kuningi ukwesekana phakathi kwabahloli namathwasa kanti imihlangano evame ukuba khona yenza ukuthi kubuyekezeke futhi kusimamiseke izifundo.’
U-Barnsley ubonge i-CAES ngokutshala kulolu hlelo, wabonga abasebenzi bakhona, ikakhulu uMQondisi wakwa-Professional Services uMnu Mark Tufts, ngokwethemba i-SSS nokuyinika indawo nezinsizakusebenza. Ubonge lonke ithimba le-SSS ngohlelo lokuqeqesha nolokwenza indawo enhle yokuqeqesha, wabalula ukuzinikela nentshisekelo yabahloli kulabo abahlola abaqeqeshwayo. Ubonge uDkt Neeshi Singh-Pillay ngokuqala lo msebenzi nokuqeqesha ithimba labahloli.
Ungoti kwezokweluleka ngengqondo kwezemfundo e-CAES SSS uNks Rossella Meusel, owenza ucwaningo lwezifundo zobudokotela ngendlela yokuhlola esetshenzisiwe, ulekelele ngokwenza uhlelo lokuhlola. Ubalule uhlaka olunosizo lohlelo, wachaza izinzizakusebenza ezivame ukunikwa izitshudeni ngezinto ezifundwayo ezivame ukunikwa zona nezisetshenziswa emsebenzini wabo. U-Meusel wengeze ngokuthi lolu hlelo lunohlaka oluhle ukukhuthaza amathwasa ukuthi athole indawo indawo yawo ewafanele emsebenzini.
Abafundi abaqeqeshwayo babonge ithimba lase-SSS, ikakhulu abahloli u-Barnsley, u-Meusel noNks Prashna Singh noDkt Kamilla Rawatlal ngezeluleko zabo, ukubeseka nokubachushisa phakathi nonyaka obunzima wokuqeqeshwa, bengeza ngokuthi babanike indawo enenhlonipho yokukhula bengabantu nabasebenzi.